warkii.com » Waatan Shuruuda Adag Ee Ay Borussia Dortmund Hordhigtay Man United Haddii Ay Dhab U Doonayaan Saxeexa Jadon Sancho
Waatan Shuruuda Adag Ee Ay Borussia Dortmund Hordhigtay Man United Haddii Ay Dhab U Doonayaan Saxeexa Jadon Sancho
Kooxda ree Germany ee Borussia Dortmund ayaa lagu soo warramayaa inay shuruud cusub ku xidhay dhigeeda Manchester United, shuruudan ayaa ah mid ku saabsan da’yarka garabka weerar ee Jadon Sancho oo dhinaca United laga doonayo.
Dortmund ayaa ugu horreynba diidan inay Sancho ku iibiso wax ka hooseeya 90 Milyan oo Pound walow ay jiraan caqabado dhinaca suuqa iyo dhaqaalaha ah kaddib saamayntii xanuunka Korona.
20 sano jirkan ayaa halka ugu sarreysa kaga jira liiska xiddigaha uu doonayo tababare Ole Gunnar Solskjaer isaga oo qudhiisu xiisaynaya inuu kooxdaas u wareego isla markaana uu qayb ka noqdo kacaanka cusub ee uu dhisayo Ole.
Sancho ayaa ku faraxsan inuu ka dhaqaajiyo Dortmund iyadoo sida warbixintu sheegayso uu doonayo inuu la midoobo xiddigo ay ugu horreeyaan Marcus, Rashford, Anthony Martial, Mason Greenwood, Paul Pogba iyo Bruno Fernandes.
In heshiiska shaqsiga ah la gaadho ayaan wax dhibaato ah ku noqon doonin Man United balse arrinta xalinta u baahan ayaa ah qiimaha lagula kala wareegayo Sancho.
Shuruuda cusub ee ay Borussia Dortmund hordhigtay Manchester ayaa ah inay war cad u keenaan kahor 10-ka bisha August isla markaana aysan taariikhdaas wixii ka dambeeya sinaba ugu ogolaan doonin inay Sancho ka iibiyaan.
Walow suuqa xagaaga la dheerayn doono sanadkan haddana Dortmund ayaa tababar u tegaysa dalka Switzerland 10-ka August waana sababta ay u doonayaa in heshiiska Sancho inta ka horreysa lagu kala farxasho.
Sidoo kale mid kamida waxyaabaha ay Dortmund ka cararayso ayaa ah inuu shaki ku jiro mustaqbalka xiddigooda iyagoo isku diyaarinaya xilli ciyaareedka dambe.
Man United ayay adkaan doontaa inay shuruudaas buuxiso iyadoo sidoo kale xisaabta ku darsanaya in baahidu aysan sidii hore u badnayn oo uu da’yarka Mason Greenwood wacdarro ka dhigayo booskii ay Sancho u doonayeen.